လက်ဘနွန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်း၌ လောင်စာဆီသိုလှောင်ကန် ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ၂၈ ဦးသေဆုံး၊ ၇၉ ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိ - Xinhua News Agency
လက်ဘနွန်စစ်တပ်မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များက နိုင်ငံမြောက်ပိုင်း Akkar ခရိုင် တွင်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားသည့်နေရာမှ အရပ်သားများအားကယ်ထုတ်နေသည်ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်သြဂုတ် ၁၅ရက်တွင် တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဘေရွတ်၊ သြဂုတ် ၁၆ ရက် (ဆင်ဟွာ)
လက်ဘနွန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်း၊ Akkar ခရိုင်၊ Tleil မြို့၌ သြဂုတ် ၁၅ ရက် နံနက်အစောပိုင်းတွင် လောင်စာဆီသိုလှောင်ကန်တစ်ခု ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် အနည်းဆုံး လူ ၂၈ ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး၊ ၇၉ ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း အမျိုးသားသတင်းဌာနတွင်ဖော်ပြထားသည်။
သေဆုံးသူများနှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများထဲတွင် စစ်တပ်မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပြည်သားများပါဝင်ကြောင်း လက်ဘနွန်စစ်တပ်ဘက်က ဆိုသည်။
Akkar ခရိုင်ရှိ မှောင်ခိုဈေးရောင်းချသူများထံမှ ဝှက်၍ သိုလှောင်ထားသော လောင်စာဆီတိုင်ကီတစ်လုံးအား သိမ်းဆည်းပြီးရမိပြီးနောက် စစ်တပ်မှ နိုင်ငံသားများအား လောင်စာဆီ ဖြန့်ဖြူးနေစဉ် ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း လုံခြုံရေးသတင်းရင်းမြစ်များ၏ ပြောစကားကို ဒေသခံမီဒီယာများက ဖော်ပြခဲ့သည်။
ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားသည့်အချိန်တွင် အနီးအနား၌ လူ၂၀၀ခန့်ရှိသည်ဟု သတင်းရင်းမြစ်များမှ သိရသည်။ ထို့ပြင် အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာ၌ ကြက်ခြေနီ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ က လိုက်လံရှာဖွေနေဆဲဖြစ်ကြောင်း လက်ဘနွန်ကြက်ခြေနီအသင်းက သြဂုတ် ၁၅ ရက် နံနက်အစောပိုင်းတွင် ကြေညာခဲ့သည်။
ယင်းပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ဖြစ်ပွားသည့် ပြင်းထန်သော မီးလောင်ဒဏ်ရာများအား ကုသရန် လိုအပ်နေသည့် ဆေးဝါးများ၊ အပူလောင်လိမ်းဆေးရည်များနှင့် အခြားပစ္စည်းများအား ထောက်ပံ့ပေးရန် လက်ဘနွန်ရှိ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအားလုံးထံ အမြင့်ဆုံးကယ်ဆယ်ရေး ကော်မတီမှ တိုက်တွန်းခဲ့သည်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကြောင့် ပြင်းထန်သည့် မီးလောင်ကျွမ်းသူတချို့အား တူရကီနိုင်ငံနှင့် အီဂျစ်နိုင်ငံသို့ လွှဲပြောင်းကုသမှုခံယူရန် တရားဝင်ဆက်သွယ်ခဲ့ကြောင်း ယင်းကော်မတီ၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး Mohamad Kheir ကဆိုသည်။
ယင်းမတော်တဆမှုကြောင့် ထိခိုက်သေဆုံးခဲ့ရသူများအတွက် အလွန်ဝမ်းနည်းကြေကွဲကြောင်း နောက်ဆုံးဖြစ်ပျက်မှုအခြေအနေများအား ဆွေးနွေးရန် အဆင့်မြင့်ကာကွယ်ရေးကောင်စီအစီးအဝေးကျင်းပစဉ် လက်ဘနွန်နိုင်ငံသမ္မတ Michel Aoun က ထည့်သွင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
မကြုံစဘူးငွေကြေးအကျပ်အတည်းအခြေအနေများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသော လက်ဘနွန်နိုင်ငံတွင် လပေါင်းအတန်ကြာ လောင်စာဆီပြတ်လပ်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ (Xinhua)
BEIRUT, Aug. 15 (Xinhua) — At least 28 people were killed and 79 others injured on Sunday early morning inafuel tank explosion in the town of Tleil in Lebanon’s northern district of Akkar, the National News Agency reported.
The Lebanese army said that the dead and the injured included army members and citizens.
Security sources were quoted by media outlets as saying that the explosion took place when the army was distributing fuel among citizens after having seizedafuel storage tank hidden by black marketeers in Akkar.
Sources added that about 200 people were nearby at the time of the explosion. Moreover, the Lebanese Red Cross announced earlier in the day that its teams were still searching the scene.
The High Relief Committee urged all international organizations in Lebanon to provide medicines, serums and other materials needed to treat the severe burn cases of the injured in the explosion.
The committee’s Secretary General Mohamad Kheir said that he has contacted officials in Turkey and Egypt to transfer some severe burn cases for treatment in these countries.
Lebanese President Michel Aoun expressed his deep sadness for the incident, and heldameeting with the Higher Defense Council to discuss the latest developments.
Lebanon, which is facing an unprecedented financial crisis, has been grappling with fuel shortages for months. Enditem